Metallurgy Uye Kukanda Viwanda Fekitori | China Metallurgy Uye Kukanda Maindasitiri Vagadziri, Vatengesi
Seye yepamusoro-soro mutengesi weceramic firita, SICER inofungidzirwa mukugadzirwa kwezvigadzirwa mumhando ina dzezvinhu, zviri silicon carbide (SICER-C), aluminium oxide (SICER-A), zirconium oxide (SICER-Z) uye SICER -AZ. Chimiro chayo chakasarudzika chetatu-hukuru hwetiweki inogona kunyatso bvisa marara kubva pasimbi yakanyungudutswa, iyo inogona kuvandudza mashandiro echigadzirwa uye microstructure. SICER zvedongo Sefa rave nevakawanda kushandiswa mune nonferrous simbi filtration uye Kudzingwa indasitiri. Nekutungamira kwekudiwa kwemusika, SICER yakagara yakatarisana neR & D yezvigadzirwa zvitsva.
Corundum-mullite composite ceramic inopa yakanakisa yekupisa yekuvhunduka uye michina chivakwa. Nezvinhu uye dhizaini dhizaini, inogona kushandiswa kune yakanyanya kushanda tembiricha ye1700 ℃ mune oxidizing mhepo.
Quartz ceramic ine yakanakisa yekupisa yekuvhunduka kuramba kushanda nekuda kweiyo gorosi yekugadzirisa optimization. Quartz ceramic ine coefficient diki yekuwedzera kwekushisa, yakanaka makemikari kugadzikana uye kuramba girazi kunyausa ngura.